NAB faafinta wararka by Broadcast Beat. Wargeyska rasmiga ah ee NAB Show, Producer of NAB Show LIVE - Page 862 - NAB Show News: Warbaahinta, TV & Raadiyaha tiknoolajiyada iyo Warshadaha soo saarista boostada. Soo-saaraha NAB LIVE
Qaar ka mid ah axsaabta Boston waxay ku jiraan mar kale wararka. Shirkadda hormariska ah, oo sii wadata inay wax ka qabato inta badan ...
Postium Korea, Ltd., naqshadeeye iyo soo-saaraha talaabooyinka la-socodsiinta fiidiyoow ee loogu talagalay broadcas ...
- Wada shaqeeyn ballaaran oo ay ku jiraan nalalka NAB Show New York - WASHINGTON, DC - T
Ururka Qaranka ee Warbaahinta ayaa aqbalay waraaqo farsamo oo loogu talagalay daabacaadda ...
Lixda darajo ee loogu talagalay HDR iyo 4K Ultra HD ee Technicolor PostWorks Wareega 6aad iyo kan ugu dambeeya Emmy abaalmarinta wi ...
KHQ-TV Supercharges Dijital Video ah oo leh FUEL, Xarunta Dhexe ee Cirka Dhibaatada Xawilaadda
Dhowr bilood ka hor waxaan qoray maqaal ku saabsan Bitcentral, oo ah qaybta ugu muhiimsan ee wax soo saarka wararka ...
#NABSHOWNY: Broadfield wuxuu ku dhawaaqay Iskaashiga Qaybinta Qalabka RED
Broadfield Distributing, Inc. wuxuu si rasmi ah u shaaciyay iskaashiga qaybinta ee RED Cinema a ...
#NABSHOWNY Ha Joojin Shaxda Gudbinta Guddiga Caalamiga ah: Sida Telefishanka aan la Laabaneynin wuxuu Dib u Qaadi Karaa Iskuduwaha!
Xirfadlayaal badan oo xirfadlayaal ah ayaa isku raacay, in qaababka aan soo saarnay telefishinada badan ee kamaraduhu ay noqdeen kuwo isku mid ah
VEGALUX 300 SOO BOOQASHADA LOOGU TALAGALAYO Sawirada #NABShowNY
FLUOTEC, abaalmarinta badan ee abaalmarinta iyo soo saaraha hogaamiya qalabka nalalka casriga LED ee ...
Calrec Debuts Hore New Impulse Core ee NAB Show New York
Qodobka ugu muhiimsan waa farsameynta codka awood leh iyo mihnad-wadid la socota AES67 iyo SMPTE 2110 ...
One iyo Only, Robert De Niro Keynote Keynote #NABSHOWNY
Robert De Niro (waxaan u baahanahay in badan) waxay noqon doontaa hogaaminta 2018 Show Opening at NAB Show New York. De N ...
IBC 2018 - Dib u eegida Ross of #IBCShow
IBC waa mid ka mid ah saldhigyada ugu weyn ee taariikhda warshadaha warbaahinta iyo waxay bixisaa qiimo leh o ...
Plura si ay u sii daayaan alaabta wax burburtay ee #NABShow New York
Plura, waa shirkadda hormuudka ah ee caalamiga ah ee wax-qabadka dijitaalka ah iyo wax-soosaarka video-ga ...
ATTO iyo AVID: Wadashaqeyn la aqoonsan yahay oo loogu talagalay in ka badan Sanadka 20
ATTO Technology, Inc., ayaa ku dhawaaqay in ThunderLink® 40GbE iyo 10GbE ThunderboltTM 3 inay ku xiraan ...
#NABSHOWNY Dhiirrigelinta $ 100: NY GOOBTA SHABAKADAHA CUTUBKA, NAB SHOW NEW YORK & AES Exhibitions
Waqti ayaa weli ka tagaya helitaanka $ 100 $ 2-maalin dhamaystiran (si joogto ah $ 895) si fudud ...
#BASC2018 Digniiyaha Goobta: Osprey Video
Osprey Video ayaa soo bandhigi doonta tiknoolajiyadooda cajiibka ah ee IBC2018, RAI Amsterdam at sta ...
Lawo Magacyada Phil Myers Agaasimaha Sare ee Nidaamka IP
Phil Myers wuxuu ku biiray Lawo, hogaamiyaha caalamiga ah ee teknooloojiyada casriga ah ee loogu talagalay barnaamijka i ...
Fox Sports Florida / Sun Sports waxay hadda raadineysaa injineernimo wakhti buuxa. Mawqifkani wuxuu bixin doonaa taageerada injineeriyadda ee dhammaan cuntooyinka soo socda iyo kuwa soo socda, taageerada wax soosaarista Studio oo ay ku jiraan dayactirka iyo rakibidda qalabka warbaahinta iyo farsamaynta qalabka Fox Sports Florida ee Ft Lauderdale iyo Orlando. Mas'uuliyadaha: - In la xaqiijiyo dhammaan qalabka gudbinta PLN waa qalabeeyo oo si sax ah u shaqeynaya telefishinnada dhacdooyinka nool; waxay qabataa kantaroolka tayada ee dhammaan soo-galootiga PLN ee soo-galootiga ah iyo xajmiga iyo hagaajinta iyo dukumintiyada dhibaatooyinka farsamo. - Taageerada injineernimada ee dhammaan wax-soo-saarka rikoodhka ah iyo kuwa la qoondeeyey. - Inay bixiyaan taageerada injineernimada leh dhammaan tv-ga oo dhan ...
Isboortiga Isboortiga - Kaaliyaha Soo Saarista
Marka la eego kormeeraha wax-soo-saaraha, jagadani waxay ku lug yeelan doontaa dhammaan qaybaha soo saarista dhacdooyinka cayaaraha ee LIVE / show. Waajibaadka waxaa ku jira qorista iyo hagaajinta jaantusyada, jaangooyooyinka, muuqaalada, iyo dadaallada kooxda la xiriira; ururinta isirrada muuqaalka; kondensing tapes / warbaahinta dhijitaalka ah iyo qorista waxyaabaha kaydinta. Mas'uuliyadaha - Ku-talagal, beddel mawduucyada muhiimka ah, teesooyinka, muuqaalada iyo soo-ururinta xubno. -Waxaa la shaqeeya soo saarayaasha istuudiyaha iyo qolka isku hagaajinta si ay isugu uruuriyaan shayada iyo abaabulaan walxaha. -Inay ka shaqeeyaan qorshaha wax soo saarka iyo qalabka. Isu soo uruuri oo qor gundhigyada, muuqaalka, wareysiyada, iyo waxyaabaha muhiimka u ah. Helitaanka iyo caawinta kaydinta warbaahinta. -Ku soo iibso mashaariic gaar ah. -Ka qayb qaata kulamada iyo wicitaanada shirarka la xiriira ...
Waajibaadka: - Xiriiriyaha suuq-geynta ayaa isku duwi doona fulinta dhammaan shabakadaha nambarada kartida / marathons, iyo dhiirrigelinta macmiilka loo qaabeeyey. Tani waxaa ka mid ah si toos ah ula shaqeynta suuq-geynta shabakada iyo macaamiisha si ay u helaan dhammaan qalabka hal-abuurka ah, jadwalka xaafadaha ganacsiga ee lala xiriiro shabakada, keydinta kaydinta Qorshaha Istaraatiijiga ah, kulanka kulanka wax soo saarka iyo hubinta in kor loo qaado si haboon. - Si joogta ah u ilaali, cusbooneysii oo u bixiya xaaladda Nacaybyada Naqshadaha iyo qaybaha kala duwan ee G: u kaxaynta xoogga iibka iyo suuqgeynta shabakada. Jaangooyooyinkaasi waxay ku jiraan dhammaan macluumaadka la xidhiidha Kumbuyuutarka Abaabulka ah ee la iibiyo oo la heli karo. - ...
Artforum wuxuu raadinayaa isbahaysi soo saarid. Khibrad daabacan ayaa loo baahan yahay. Xirfadaha Adobe CS waa muhiim. Shaqadani waxay ku lug leedahay dhammaan qaybaha daabacaadda joornaalka-daabacaadda, digital, iyo maaraynta webka.
Xafiiska soosaarka Interneedka
Xafiiska Wax-soo-saaraha Intern / Assistant wuxuu heli doonaa fursad uu ku barto xirfadaha xafiisyada maamulka iyo wax soosaarista, waxay xiran doonaan koofiyado badan oo taageeraya maamulayaasha wax soosaarista leh qorshe safar, amarro iibsi, warbixinnada kharashka iyo lacag yar yar; wuxuu taageeri doonaa shariikadda wax soo saarka sheeko iyo baaritaan aruurin, wuxuuna qori doonaa qoraalka iyo qoraalka wareysiga. Musharrixiinta ku habboon waxay yeelan doonaan waxbarasho ama tababbarro wax soo saarka ama soo-saarka danbe iyo sidoo kale xiiso xooggan oo ku saabsan filim fanka ah, cilmi baaris iyo dhacdooyin hadda. Musharrixiinta waa in loo abaabulo, xirfadle, xiiso leh, oo u furan waxbarashada. Aqoonta shaqada ee Microsoft Office oo ay ku jiraan aasaaska aasaasiga ah ee Excel ayaa loo baahan yahay. Waayo-aragnimada leh hal abuur ...
Maamulaha Wax soosaarka-Goobaha Guud ee Concert Hall
Shenandoah Conservatory of University of Shenandoah ayaa raadinaysa maamulaha wax soo saarka ee khibrad u leh dhismayaasha xafladaha xafladaha si ay u bilaabaan isla markiiba. waajibaadka aasaasiga ah ee this waqti-buuxa ah, meel ka faa'iideystey ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn maaraynta hawlaha Concert Armstrong Hall iyo Goodson quraan Hall / Chapel maalin-ka-maalin isticmaalka Conservatory ee, ilaalinta nidaamka hawlgalka siman loo isticmaalo University guud ee Conservatory goobaha waxqabadka muusikada iyo jadwal dhacdooyinka dhammaan dhacdooyinka meelaha waxqabadka leh ee leh xarumaha ka baxsan iyo kuwa ka baxsan dhismayaasha; la shaqeynta Qeybaha Qaybaha, Maamulayaasha Daraasaadka, iyo Agaasimaha Maareynta ah ee ilaalinta jadwalka guud ee la heli karo iyo xallinta khilaafaadka jadwalka sida loo baahdo; rukumo iyo hubinta ...
Kaalinta Kaalinta Kaalinta
Aqoonso dhammaan noocyada muusikada gaar ahaan bedelka, hip-hop (dugsi hore iyo cusub), r & b iyo pop. WAA MAXAY YIHIIN MUSICI AH. Nasiib wacan ee dhaqanka dadweynaha gaar ahaan muusikada, dhalinyarada da 'yarta, actressyada iyo bandhigyada telefishinka ee sanadaha ugu dambeeyay 10. Wuxuu caan ku muujiyay farshaxan hoose iyo kuwo soo koraya oo ah muusikooyin badan. Dhibaatada Internetka - Codsadayaashu waa inay ogaadaan sida ay u khuseeyaan Facebook, blogyada muusikada, goobaha wararka muusikada, Twitter, Instagram, boggaga YouTube iyo muujinta adkaysiga weyn ee cilmi baarista. Abaabulaan oo awood u yeeshaan in ay sii wadaan raadinta hogaaminta tuurida, xafidaada feylasha, jadwalka kalfadhiga iyo dib u eegida internetka. Ugu dambeyntii, kartida edbinta (hal qof) - ...
Kaaliyaha Wax-soo-saaraha ayaa mas'uul ka ah abuurista iyo saxsanaanta garaafyada iyo muuqaalka fiidiyowga si loogu isticmaalo hawada. Waxay ka caawin doontaa Producerayaasha inay helaan fiidiyoow, baaritaan xogta tirakoobka iyo dhismayaasha waxyaallaha labadaba iyo wax-soosaarka fog. Darajada kuleejka ayaa loo baahan yahay Waa in uu leeyahay aqoon isboorti oo xoog leh iyada oo xoogga la saarayo kuleejka iyo kubbada kubada kolayga iyo Major League Baseball. Waa in uu leeyahay xirfado isgaarsiineed oo adag, labadaba qoraal iyo afka.
Maareeyaha Soo Saarista Cutub
Filimka shahaadada USC-ka ee qalin-jabinta (cabsi / gef), oo ah fulinta fulinta jilayaasha TV-ga, waxay raadineysaa UPM. Jadwalka Waxqabadka: bartamihii illaa dabayaaqadii Janaayo ee LA Tentative: Jan 17-21; Jan 25-26 Fadlan codso haddii aad tahay shaqsi aad u abwaansan oo abaabulan oo shaqeyn kara waqtigaa. Inkastoo xiisadani tahay mid aan loo baahneyn, haddana waa fursad weyn oo aad ku heli karto shaqadaada oo ay daawadaan noocyo badan oo filim ah, maadaama aan qorsheyneyno inaan filimkan ku muujino bandhigyo badan oo adduunka ah! Cunto la siiyay
Filimka shahaadada USC-ka ee qalin-jabinta (cabsi / murugo), oo ah fulinta fulinta jilayaasha TV-ga, waxay raadineysaa naqshad wax soo saar leh oo hal abuur leh. Jadwalka Waxqabadka: bartamihii illaa dabayaaqadii Janaayo ee LA Tentative: Jan 17-21; Jan 25-26 Fadlan codso haddii aad tahay shaqsi aad uwanaagsan, khibrad iyo xirfad leh oo shaqeyn kara waqtigaa. Inkastoo xiisadani tahay mid aan loo baahneyn, haddana waa fursad weyn oo aad ku heli karto shaqadaada oo ay daawadaan noocyo badan oo filim ah, maadaama aan qorsheyneyno inaan filimkan ku muujino bandhigyo badan oo adduunka ah! Cuntooyinka la bixiyay Fadlan ...
Qalabka masaafada gobolka ee Sarasota, FL waxay raadinaysaa Associate Prodaction oo ka masuul ah rinjiyeynta iyo rinjiga rinjiga. Waajibaadka waxaa ka mid ah: kormeerka iyo fulinta badeecadaha, kormeerka iyo fulinta rinjiga muuqaalka, iyo taageerada maamulka ee Maareynta Wax-soo-saarka. Ugu yaraan seddex sano oo waayo-aragnimo tiyaatarka ah ayaa loo baahan yahay.
Digital Production Kaaliyaha
Waajibaadka: Maamul website WebsitesOptimize xawaaraha, content, gaadiidka, iyo layoutDownload / tayadoodii / ucabirto dhan videos iyo sawiro for web viewingCreate iyo astaysto naqshadeynta qalabka martiqaad bandhig visualsKeep warbaahinta bulshada, goobaha Artnet, iyo Wikipedia updatedCommunicate updated inay websites lamaanahaaga File Digital Archive ManagementCoordinate digital maamulka file la updates image Production ManagerRecord in database ah iyo diyaariyo files digital for printer Hayso saarka post, jadwalka farshaxanka wanaagsan, liiska taleefanka iyo xiriirada updatedUpdate qoraalada maalin kasta oo ay ku jiraan # raadraaca ee shixnad print iyo farshaxanka statusDocument for iibka iyo bandhigyo ka
Barnaamijka Mabaadi'da Macmiilku waa barnaamij mudnaanta leh si loo aqoonsado loona horumariyo jiilka xiga ee hoggaamiyayaasha wax soosaarka ee ESPN. Waa barnaamijkayaga soo galootiga ah ee loogu talagalay in lagu hormariyo xirfadaha wax soo saarka iyo aqoonta ka qaybgalayaasha iyo in ay siiyaan aasaas si ay ugu sii socdaan guud ahaan ururka. Barnaamijka waxaa loogu talagalay inay bixiso waddo xirfadeed oo wanagsan, rajooyin waxqabad oo qeexan iyo fursado barasho iyo fursado horumarineed oo loogu talagalay hoggaamiyeyaasha mustaqbalka ESPN. ESPN, Inc., Hogaamiyaha Adduunka ee Isboortiga, waa shirkadda ugu wayn ee munaasabadaha isboortiga ee cayaaraha kubada cagta, oo leh qaabka ugu ballaaran ee hantida isboortiga ee miidhiyaha oo ay la socdaan shirkadaha 50. Xarunta dhexe ee Bristol, Connecticut, ESPN waa ...
Dhagaraynta Guga - Wax soo saarka / Hawlgallada
Marka lagu daro hawlaha caadiga ah ee maamulka, tababarada wax soo saarka waxay mas'uul ka noqonayaan caddaynta qoraallada loo qaabeeyey iyo daboolista, caawinta agaasimaha howlaha oo leh dayactir jadwalka wax soo saarka iyo macluumaadka macluumaadka, iyo diyaarinta faylasha daabacaadda. Internitka wuxuu sidoo kale ka caawin doonaa agaasimaha hawlaha iyo tifaftiraha tifaftirka alaabooyinka ka ganacsiga guriga (tusaale ahaan, dirista sawirada, sawirrada qoraaga iyo daboolka saxafiyiinta jarista iyo gelista nuqullo qoraal ah oo loogu talagalay koox tifaftiran). Iyadoo ku xiran waayo-aragnimada naqshadeynta Adobe Creative Suite, tababaraha wuxuu sidoo kale mas'uul ka noqon karaa dejinta qalabka bandhigyada, xayeysiiska website-ka Seven Stories, naqshadda qoraalka, iyo baddelka e-buugga. Shuruudaha: Shaqada adag, dadaalka, ...
Raadinta shakhsi dhalaalaya oo qaabaysan oo xiiseynaya oo leh waayo-aragnimo la leh wax soo saarka qorista. Waajibaadka waxaa ka mid noqon doona: - sameynta qiyaasaha wax soo saarka gudaha - daabacaan qiyaasida - ka ganacsiga alaabooyinka ka soo iibiya - hubinta gudaha iyo farsamooyinka daboolka / farsamada - diyaarinta xaashida qaabka iyo iibsiga amarka qoraaga - dib u eegista caddaymaha midabyada iibiya - dib u eegida buug-gacmeedka / caddaymaha jilicsan - iftiin cadeynayaRequirements: WAXAA WAX SOO SAARAY 1 1 2 / XNUMX SANNAD BADBAADINTA SHAQADA.
Wakaaladda Associated Press ayaa raadinaysa wargeyska / Warfaafinta Warfaafinta mawduuceeda Galbeedka Gobolka ee ku yaala Phoenix, Arizona. Qoraal warbaahiye ah oo ka socda mowqifka mareegta ee Mareykanka ayaa qoray, faylalka, iyo gacan ka geysta in ay maamusho howlaha qorista warbaahinta ee gobol goboleedyo badan. Qorayaashu waxay qayb ka yihiin hawlgal firfircoon, 24 / 7 oo ay ka mid yihiin tafatirayaasha qoraalka, sawir, multimedia iyo video. Xubnaha shaqaaluhu waxay u shaqeeyaan sidii koox si ay u hubiyaan inay u leeyihiin caymiska AP ee khuseeya maalinta warfaafinta dhammaan noocyada. Wargeyska ayaa baahiyay wargeyska Wargeyska gobolka, wuxuuna si dhow ula shaqeeyaa saxafiyiinta wararka iyo wariyeyaasha gobolka iyo sidoo kale warbaahinta qaranka ...
WAXYAABAHA WAX-KA-QABASHADA & MAS'UULIYADA waxaa ka mid ah kuwan soo socda: - Codka hawada ee Dub. - Samee oo la soco xeeladaha kudhaca. - U qaado wariyeyaashii hawada. - Ka jawaab telefoonada iyo ka shaqee su'aalaha dhegeysta. - Qabqabashada jeegag iyo raac fariimaha wararka. - Bixinta gargaarka guud ee shaqaalaha warbaahinta, gaar ahaan inta lagu jiro jebinta wararka. Shahaadooyinka loo baahan yahay Waa in ay mudnaanta koowaad siiyaan, qabtaan cadaadiska kama dambaysta ah, qor 45 + erayada daqiiqad. Waa inuu noqdaa qorista kombuyuutarka. Waa inay noqotaa mid la heli karo si ay u shaqeeyaan dhammaan saacadaha, habeenkii, iyo dhammaadka usbuucyada iyo in ay noqdaan kuwa ku habboon isbedelka shaqada. Heerka Sameeya Shahaadooyinka Raadiyaha iyo / ama saxaafadda ...
Sports Account Fulinta (warbaahinta Spanish)
The WFAN AM / FM halyeeyga iyo guriga radio cusub ee Yankees Newyork ayaa ah, waxaa raadinaya Sports Account Fuliyeyaasha si ay u matalaan andsell daayey Language Spanish ee New York Yankees ee Radio Network. Taas waxay u baahan tahay shaqo adag, is-upka, qof iibka andaggressive u janjeedha. Waa in aad fahamto oo respectbrands iyo sida ay u noqon lahaayeen karaa. Codsadayaasha waa in ay leeyihiin experienceat ugu yaraan hal ama wax ka badan oo ka mid ah kuwa soo socda: Sports wakiilashada Sales, Sportsor Hispanic Radio, Horumarinta Ganacsiga Cusub, Iibinta Fikrad, iyo / ama Strategic / MultiLevel Iibinta Skills. Furaha booska tani waxay noqon doontaa in ay rajo iyo developrelationships go'aanka Local iyo Regional muhiimka ah ...
Page 862 of 865«First...830840850«860861862863864»...Last »
Qodobka Archives Select Month December 2018 (160) November 2018 (406) October 2018 (496) September 2018 (495) August 2018 (397) July 2018 (876) June 2018 (869) May 2018 (871) April 2018 (831) March 2018 (780) February 2018 (685) January 2018 (605) December 2017 (396) November 2017 (712) October 2017 (835) September 2017 (608) August 2017 (583) July 2017 (710) June 2017 (543) May 2017 (621) April 2017 (695) March 2017 (704) February 2017 (340) January 2017 (364) December 2016 (608) November 2016 (344) October 2016 (556) September 2016 (622) August 2016 (1056) July 2016 (532) June 2016 (414) May 2016 (505) April 2016 (713) March 2016 (743) February 2016 (382) January 2016 (122) December 2015 (358) November 2015 (327) October 2015 (152) September 2015 (259) August 2015 (440) July 2015 (276) June 2015 (140) May 2015 (128) April 2015 (435) March 2015 (289) February 2015 (298) January 2015 (131) December 2014 (103) November 2014 (194) October 2014 (149) September 2014 (381) August 2014 (250) July 2014 (287) June 2014 (363) May 2014 (231) April 2014 (744) March 2014 (560) February 2014 (427) January 2014 (289) December 2013 (137) November 2013 (545) October 2013 (290) July 2013 (26) May 2013 (13) April 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)